Saturday November 09, 2019 - 21:05:21 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Mu'asasada Azzallaaqah oo ah garabka warbaahineed ee Jamaacada Ugargaaridda Islaamka iyo Muslimiinta ayaa baahisay kalimad maqal ah oo uu jeedinayo mas'uulka ugu sarreeya Jamaacaadi.
Sheekh Iyaad Ghaali oo ah amiirka Jamaacada JNIM ee ka jihaadda wadamada galbeedka qaaradda Afrika gaar ahaan wadamada Maali,Burkina Faso iyo Niger ayaa jeediyay kalimad uu diiradda ku saarayo dagaalka u dhaxeeya muslimiinta iyo Faransiiska.
Hoggaamiye Iyaad Ghaali ayaa kalimaddiisa kusoo hadal qaaday weerarkii aadka u xooganaa ee dagaalyahanada Shabaabul Mujaahidiin ay bishii lasoo dhaafay ku qaadeen saldhigga ciidanka Mareykanka ee Balidoogle.
Jamaacada JNIM ayaa Xarakada Al Shabaab ku ammaantay sida ay ula dagaallamayso gummeystaha Soomaaliya kusoo duulay una difaacayso diinka,dadka iyo dalka Soomaaliyeed.
"Intaas kahor iyo ka gadaalna, waxaan hambalyo u diraynaa walaaleheena sharafta badan ee kusugan Soomaaliyada ku caan-baxday deeqsinimada iyo ballan-oofinta, waxaan ugu hambalyaynaynaa guusha iyo gallada weyn ee uu Allaah ugu deeqay kadib weerarkii qorshaysnaa ee ay ku gilgileen saldhigii ciidamada cirka Maraykanka, ayna ku gumaadeen askartii Saliibiyiinta iyo xulafadoodii yuhuudda ahaa. Ilaahay ayay mahaddaas u sugnaatay" ayuu yiri Sheekh Iyaad.
isagoo hadalkiisa sii wata ayuu amiirka JNIM aad u amaanay dagaalyahannada Al Shabaab oo ku sifeeyay geesiyaal aan laloodi karin "Ragyohow halyeeyada ah ee aanan gumaysiga aqbalinoow, Ilaahay wuxuu guulihiina ku daweeyay laabaha Mu’miniinta, wuxuuna ku cara-geliyay quluubta kuwa gaalada ah. Ilaaheey wanaag ha idiinkugu abaal-gudo, khayr farabadana ha idin siiyo"
Weerarkii Al Shabaab ay ku qaadday garoonka Balidoogle oo ah saldhigga ugu weyn ee ciidanka Mareykanka ku leeyihiin Soomaaliya ayay si aad ah ugu farxeen jamaacaadka Jihaadiga ah ee ka halgama caalamka islaamka "Muslimiintu meel walba oo ay joogaan, waxaa ay ku bishaaraysanayaan guulahaas waaweyn, waxaana ay u hanqal-taagayaan in ay halkaas ka dhaxlaan noo noqoshada khilaafadii Islaamka ee raashidada ahayd" ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay Sheekh Iyaad.
Halkan ka degso Kalimadda oo Afsoomaali ku tarjuman MP3